ပလ္လင်ရှင်းတမ်း ~ မြန်မာ့သံစဉ်စာသားများ
ပလ္လင်သုံးမျိုးနဲ့ နတ်သုံးပါးကို ဖော်ပြချင်ပါတယ်ရှင်၊ ၀သုဒ္ဓိနတ် ဆိုတာကတော့ သတ္တ၀ါအရှင် မြတ်စွာဘုရားသခင်၊ ဗမာသိကြအစဉ်၊ အပရာဇီတပလ္လင်၊ ဥပပတ္တိနတ်ကို မှတ်စရာ ပြောရလျှင်ဖြင့် ခြောက်ထပ်သော နတ်ပြည်တွင်၊ ကုသိုလ်တန်ခိုးနဲ့ စံစားကာပင်၊ အထူးပိုင်စွာ စိတ်ချအစဉ်၊ သူဆိုင်ရာ ရာဇပလ္လင်၊ ရေမြေသနင်း ပြည်ရှင်မင်းကို လောကသမုတိနတ်ခေါ်တွင်၊ ရာဇပလ္လင် ရှစ်ခန်းနဲ့ကြငှန်းကိုးဆူ ဖွင့်တော်မူမယ် အစဉ်။
(ဗုဒ္ဓဘာသာ လူမျိုးတိုင်းပင် အထူးမှတ်သားကာ ထားစေဘို့ပင်၊ ရှေးဟောင်း နှောင်းဖြစ် ဧကရာဇ်စုံလင်၊ ပလ္လင် ရှစ်ခန်းနဲ့ ဆန်းတဲ့နန်းဥကင်)2 ၊
ကျက်သရေတော် စုံလင်၊ ဒို့ဘုရင်များရှိစဉ်၊ မှူးမတ်အများနဲ့ ညီလာခပါလို့ သီဟသန ဆိုတာကတော့ ပထမမြေနန်းပလ္လင်၊ ရွှေငွေမရှား အထွေထွေများ ယမနေသား မမှားအောင်စီစဉ်၊ ထိန်ဝင်းလို့ကြည်လင်၊ စိန်ရောင်မြရောင်သန်းလို့ ခြင်္သေ့ခံတဲ့ စံခဲ့တဲ့နန်းရွှေပလ္လင်။ ဒို့ဗမာဂုဏ်အင်၊ တွေးဆလို့ မမေ့ကြနဲ့ အမြဲကိုစိတ်ထဲတွင်၊ ပျိုချစ်သူမှန်ပါလျှင်၊ ကိုယ်ဇစ်မြစ်ကို ကိုယ်သွေးစမ်းလို့ ဥာဏ်စွမ်းအထူးမှတ်တမ်းတင်၊ (သွင်အပြင်ဆန်း ပလ္လင်ရှစ်ခန်း)2 နန်းတော်ဥကင်၊ ထူးထူးခြားခြား မှတ်သားထားစေချင်။ သိမှတ်ကြဘို့အစဉ်၊ ဟင်္သာရုပ်ခံ ထုတ်ပြန်၍ပင်၊ စည်းကမ်းခြားနားလို့သာ ဇေတ၀န်ခေါ်အဆောင်တော်တွင်၊ သင်္ကန်းသားနဲ့ မှန်ရာပြချင်၊ ဟံသာသနပလ္လင်၊ ဖုန်းတန်ခိုးနဲ့ပင်၊ ကျက်သရေ ရှိတဲ့ ထီးမှန်နန်းတွင်၊ ပိတုန်းသွန်းလုပ်၍ပင်၊ သေသေချာချာ စံရာတခွင်၊ ကရဝေးသာနဲ့ သဘောကြွေတဲ့ ဘမရာသနပလ္လင်၊ ပဒုမ္မာကြာပင် မှတ်သားထားပါ၊ များရှုလျှင်၊ သရက်သားမှန်စွာပင်၊ အနောက်စမုတ်မှာ ရှုကြပါတော့ ပဒုမ္မာသနတွင်၊ သိစရာပအစဉ်၊ မိဂါသနပလ္လင်၊ ရွှေသမင်ပုံသွင်၊ ရေသဖန်းသားကိုထွင်။ ဒို့ဗမာဂုဏ်အင် ……………………. မှတ်သားထားစေချင်။ စံရာတခွင် ကြငှန်းရှုလျှင်၊ မြန်မာဘုရင်နန်းဥကင်၊ ရွှေအဆင်းဝင်းလို့သာကြည်လင်၊ ထူးစွာပအစဉ်၊ မဟူရာသနပလ္လင်၊ ပေါက်သားကိုယ်တွင်းလုပ်လို့ ဒေါင်းရုပ်ခံတဲ့ပလ္လင်၊ ပညာရှင်ပေါင်းများတွင် သင်္ခါပလ္လင်အကြောင်းပြလျှင်၊ ရွှေအဆင်း ၀င်းလို့သာကြည်လင်၊ ပိန္နဲသားခြားနားပြုပြင်၊ သေချာအောင်မှတ်သားလို့ ထားကြပါတော့ရှင်၊ ဗြဲတိုက်တော်ကိုကြည့်လျှင် စကားသားနဲ့ ဆင်ခံတဲ့ပလ္လင်၊ အမျိုးမြန်မာတိုင်းပင်၊ မှတ်ကြတော့ ဂဇာသနခေါ်တွင်။ ဒို့ဗမာဂုဏ်အင် ………………. မှတ်သားထားစေချင်။